I-Semalt ichaza izinto ezi-5 zokukhangisa kokuqukethwe kwe-2017
Unyaka wezi-2016 wabona amabhizinisi amaningi asebenzisa ukukhuthazwa okusekelwe ekuqukethweamasu kuzo zonke izimboni. Ukukhangisa okuqukethwe kokuqukethwe kubangelwa ukuguqulwa kwayo, nokukwazi ukubandakanya komsebenzisi. Itfuthi kubiza kancane kunezinye izindlela zokumaketha. Ngenombolo ekhuphukile yezivimbela zezikhangiso, yindlela kuphela eqinisekile yokuthola imilayezoyonkana. Ama-brand kudingeka aqhubeke nokugxila ekukhangiseni kokuqukethwe ngo-2017 - vps very cheap.
u-Alexander Peresunko, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt Amasevisi weDivaysi, uyaqhubeka nokwamukela amasu ayisi-5 alandelayo ukuze afeze imisebenzi yokuthengisa ngokuphumelelayo.
1. Ukukhiqizwa kokuqukethwe okwengeziwe komsebenzisi
Ukusetshenziswa kokuqukethwe kwe-intanethi kwanda ngenani labasebenzisi be-intanethi.Amaphesenti angu-70 wabathengisi be-B2B ufisa ukudala okuqukethwe okuningi uma kuqhathaniswa nonyaka odlule. Noma kunjalo, ukwandisa okuqukethwe okukhona kuyakhonzanjengengxenye yesisombululo. I-Google inezinhlelo zokusesha eziyinkimbinkimbi, futhi iBots Yabo Yokusesha manje ingakwazi ukucacisa ubuhle nokubalulekakokuqukethwe ku-intanethi kubasebenzisi. Njengoba ukuhlanganyela kungenye yezinhloso eziyinhloko zokumaketha kokuqukethwe, ukubaluleka kokuqukethwe kuya kuI-niche izithameli zinyuka ukubaluleka ekukhangiseni okuqukethwe.
Ukuphakama kwezindaba zomphakathi kwandisa inani lokuthonya abantu ngabanye.Abathengisi baye bakhulisa ukugxila kwabo ekukhangiseni okuthonya ngenxa yalokho..Ngokusekelwe ku-MuseFind, amaphesenti angu-92 wamakhasimende abeka ngaphezuluuthembela kubathonya kunokubambelela okudumile noma izikhangiso. U-2016 usifundise ukuthi ukugqugquzela ukukhangisa kubandakanyaezungeze ukwethenjwa, futhi ubuqiniso bamathonya yilokho imikhiqizo efuna njengoba iqhubeka nokulalela ukubalulekaabathonya abancane emkhankasweni wabo wokumaketha.
3. Ukuqukethwe komuntu siqu
Amanethiwekhi omphakathi anemikhakha ehlukene uma kuziwa ngokwabelana futhiukukhuthaza okuqukethwe ku-inthanethi. Abanye bavumela ukwenza ngokwezifiso ngezinto ezifana nendawo noma ama-hashtag. Kuba lula ukuqhuba imaketheukuhlukaniswa kwemisebenzi usebenzisa le misebenzi yokuhlaziya kuma-social media. Ngakho-ke, kungaba ukuhlakanipha ukusebenzisa kahle lezi zici.Ukuqukethwe okwenziwe ngabomuntu kuyindlela eyodwa yokuqinisekisa ukuthi ukumaketha kokuqukethwe kugxile kwinombolo ethile, ngaleyo ndlela kukhulisa ukuhambisana, ukubandakanya,ukukhumbula umklamo, nangaphambi komncintiswano.
4. Okuqukethwe kwevidiyo
Ngokuthuthukiswa kwe-video compressing algorithms, abathengisi bathumela kuwo wonke umkhiqizoimiyalezo, ukukhushulwa, futhi bahlanganyele abasebenzisi ngaphandle kwemingcele. Kukhona amathuluzi amaningana okungaxhunyiwe ku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi ukusiza ekudaleni okuqukethwe kwevidiyoisikhathi esingaphansi. Njengoba nje la mathuluzi asiza ukudala amavidiyo, ukubandakanyeka kuncike ekutheni abanikazi bebhizinisi baqhuba kanjani imibono yabo kwividiyookuqukethwe. Amabhizinisi angadonsela ugqozi ukuthi amanye ama-brand aphumelele asebenzisa kanjani imikhankaso yabo yevidiyo. Ukusebenzisa amavidiyo ahlanganyele nxazonkeIsiphakamiso esiyingqayizivele sokudayisa sikhangisa amakhasimende amaningi kanye nokusiza ekukhuleni kwesabelo samakethe.
5. Imithombo yezokuxhumana njengomthombo wezindaba
Ucwaningo olwenziwa ngo-2016 lubonisa ukuthi ngaphezu kwamaphesenti angu-50 ezokuxhumana nabantuabasebenzisi basebenzisa njengemthombo wezindaba. Ngokuthandwa okwandayo kwemithombo yezenhlalo njengesiteshi abadayisi abasebenzisa ukudlulisa okuqukethwe,sekuyisikhathi esiphezulu ukuthi amabhizinisi asebenzise lezi ziteshi ukuletha izindaba kanye. Imithombo yezokuxhumana inekhono lokudlulisa noma yiniokuphathelene nomkhiqizo othize.
Amasu amasha wokumaketha okuqukethwe avela njalo ngonyaka okusho ukuthiukwenza ama-tweaks kumasu wokuqala wokuthengisa. Ukungahambisani nemikhuba yamanje yokumaketha kokuqukethwe nokufaka imali kuzo kuzokubalulekile njengokusebenza ngokwezifiso zokukhangisa okuqukethwe. Lezi zizisebenzisa zonke izindawo zokuthintafinyelela kumakhasimende, unikeze izixazululo usebenzisa okuqukethwe, futhi udala indlela yokulwa engenayo impi eya esixazululweni.